Warkii.com-News and information about Somalia NIN KU HADLI KARA 56 LUQADOOD OO CAALAMKA LAGAGA HADLO, DALALKA LUUQADAHAASI LAGAGA HADLO IYO QAABKUU U BARTAY EE MUCJISADA AH!! - Warkii.com-News and information about Somalia
Kani waa Muhamed Mešić oo ah ama loo aqoonsaday wiil mucjiso ah oo dad badan oo adduunkan ku nooli maanta aanay rumaysan Karin arrinta uu sameeyey ama xaqiijiyey maadaama uu si faseex ah ugu hadli karo 56 luqadood oo kala duwan. 32 sanno jirkan Muhamed Mešić ayaa warbixnada laga diyaariyey waxa ay daaha ka rogayaan in aanu dhinaca fahamka iyo xifdiga la mid aheyn dadka kale ee adduunka wakhtigan ku nool.
Ninkan Dhallinyarada ah ayaa la sheegay in ku hadalka 56-kan luuqadood ay u dheer tahay inuu fahmi karo in kabadan 70 luuqadood oo kala duwan oo kale.
Tan iyo markii uu kusoo koray magaalada Tuzla, ee hore uga tirsaneyd dalkii la odhan jiray Yugoslavia balse haatan ka tirsan Bosnia Herzegovina wiilkaan lagu magacaabo Muhamed Mešić wuxuu diiradda saari jiray inuu barto ku hadalka luuqado badan oo kala duwan.
Wuxuu leeyahay tayo cajiib ah sababtuna waxay tahay si dhaqso ah ayuu ku baran karaa luuqadahan kala duwan, wuxuuna bilaabay shaqadan cajiibka ah keliya markii uu 5 sanno jirka ahaa.
Qoyskiisa ayaa fasax ku tegay dalka Giriigga wuxuuna dhegeysan jiray luuqadda ay ku hadlaan deriskoodu sidaas ayuuna durba isagoo dhallinyaro ah ku bartay luuqadda Giriigga.
Maxamed Mešić wixii intaas ka dambeeyey wuxuu xitaa ka caawiyey aabihii inuu xidhiidh la sameeyo dadka u dhashay dalkaasi Giriigga markii uu damcay inuu gaadhi mustacmal ah iibsado. Wixii intaa ka dambeeyey qoyskiisa ayaa la yaabay fahmada wiilkooda iyo mudada gaaban ee uu ku bartay luqaddan. Ka dibna waxay ku dhiirrigeliyeen dadaalkiisa.
Haatan isagoo 32 sanno jir ah wuxuu ku hadli karaa 56 luqadood halka uu guud ahaan fahmi karo 70 luqadood.
Wuxuuna shaaca ka qaaday inuu 200 oo maalmood oo ka mid ah sannad kasta ku qarash gareeyo duulimaad uu ku kala marayo adduunka daafihiisa maadaama uu doonayo inuu weli barto luuqado kale.
Luuqadaha English, Arabic, Portuguese, French, Japanese iyo Georgian ayaa ka mid ah luuqadaha uu ku hadli karo wiilkani si fasiix ahna ugu hadli karo.
Qaabka uu ninkani luuqadahan u bartaa waa safar uu dalalka luuqadahaasi lagaga hadlo ku tago iyo internetka oo uu aad uga barto luuqadahaasi isaga oo fahmo ahaan markaaba qabta ereyada iyo macnahooda iyo ku hadalkoodaba waxaana loo aqoonsaday mid ka mid ah dadkii ugu maskaxda badnaa boqollaalkii sano ee ugu dambeeyey.